नारायणी नदीमा जलयात्रा शुरु, क्रुजमा यात्रा नगर्ने ? | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
नारायणी नदीमा जलयात्रा शुरु, क्रुजमा यात्रा नगर्ने ?
access_time२०७६ साल आश्विन १८ गते, शनिबार ०९:१३ AM chat_bubble_outline Comments folder_open पर्यटन
चितवन, तनहुँ र नवलपुर जिल्लाको सिमानामा बग्ने यस नदीमा सञ्चालन गरिएको जलयात्राको लम्बाइ ४५।५ किलोमिटर रहेको छ । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नं ६ कालिखोलामा स्टेशन राखेर भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १६ को काभ्रेघाटसम्म जल यातायाता शुरु गरिएको हो ।
“त्रिवेणीसम्म मोटरबोट सञ्चालनका लागि थुप्रै बाधा रहेका छन्”, दाहालले भने, “यस्ता बाधा हटाउँदै समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।” जल यातायातलाई त्रिवेणी धामसम्म पुर्याउन सकेको खण्डमा ऐतिहासिक धार्मिकस्थल वाल्मीकि आश्रममा पर्यटक भित्र्याउन सकिने उनको भनाइ छ।
पर्यटनलाई प्राथमिकता राख्नेछौँः मन्त्री गुरुङ
व्यवसायीको प्रश्न, ‘पर्यटन उद्योग र मजदुर बचाउने कार्यक्रम खै ?’